ShweMinThar: Birth Control ကိုယ်ဝန်တားနည်းများ
ကျနော် အသက်က ၂ဝ ပါ။ သိပ်မကြာခင်မှာ မင်္ဂလာဆောင်တော့မှာပါ။ ကျနော်ယူမဲ့ အမျိုးသမီးကလည်း ကလေး မလိုချင်သေးဘူးပြောပါတယ်။ ယူပြီးချိန်မှာတားဆေးသုံးသင့်ပါသလည်းဆရာ။ နှစ်ယောက်လုံးက အသက်ငယ်သေးတော့ သိပ်မသိကြလို့ပါ။
1. Combination pills ဟော်မုန်း နှစ်မျိုးတွဲဆေး
လူအများဆုံးသုံးတယ်။ ဝယ်ရတာလွယ်တယ်။ ဈေးမကြီးပါ။ (၁) မျိုးဥထွက်မှာကို တားပေးတယ်။ (၂) သားအိမ်ဝက ချွဲကိုလဲ စေးပျစ်စေလို့ သုက်ပိုးဝင်လာဘို့ ခက်ခဲစေမယ်။ (၃) သားအိမ်-အတွင်းဆုံးလွှာကိုလဲ သန္ဓေတွယ်ကပ်မှု မဖြစ်နိုင်အာင် ပြုပြင်ပေးတယ်။ ၂၁ လုံးပါကပ် နဲ့ ၂၈ လုံးပါ ဆေးကပ်တွေနဲ့ရှိတယ်။ ၂၁ လုံးဆိုတာ ဟော်မုန်း ပါတာတွေချည်း ဖြစ်တယ်။ ကျန် ၇ လုံးမှာ ဟော်မုန်းမပါဘူး။ ၇ လုံးပိုထည့်ထားလို့ ၂၈ လုံးအကုန်မှာ နောက်ဆေးကပ်သစ် သောက်ဘို့ သိသာတယ်။ ၂၁ လုံးပါဆေးကပ် သောက်သူက ကြားထဲမှာ ၇ ရက်တိတိ နားထားရမယ်။
နေ့တိုင်း သောက်တာမှန်ရင် ၉၉% စိတ်ချရတယ်။ ရာသီသွေးဆင်းတာ မများဘူး။ ရက်မှန်တယ်။ ရာသီလာလို့ နာတာ သက်သာတယ်။ မလာခင်ဖြစ်ချင်တာတွေလဲ သက်သာတယ်။ မျိုးဥအိမ်-ကင်ဆာ၊ သားအိမ်-ကင်ဆာ အဖြစ်နည်းတယ်။ မျိုးဥအိမ်-အကျိတ် နဲ့ ရင်သား-အကျိတ်ဖြစ်တာ နည်းတယ်။ PID တင်ပါးဆုံတွင်းရောဂါ အဖြစ်နည်းတယ်။ ဝက်ခြံထွက်တာ သက်သာတယ်။ သားအိမ်ပြင်ပ-သန္ဓေတည်တာ နည်းတယ်။ Endometriosis ဖြစ်နေလို့ ခံစားရတာတွေလဲ နည်းစေတယ်။
ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေ = ပျို့-အန်၊ ခေါင်းကိုက်၊ ရင်သားတင်း-နာ၊ လိင်စိတ်နည်း၊ ခေါင်းမူး၊ ဆေးစသောက်ဘူးသူတွေ တလ၊ နှစ်လမှာ ရာသီရက် မမှန်ဖြစ်နိုင်တယ်။ ရှားရှားပါးပါး ဖြစ်နိုင်တာတွေကတော့ သွေးဖိအားတက်၊ နှလုံး၊ သွေးကြောပိတ်၊ အသဲကင်ဆာ၊ သည်းခြေအိတ်ကျောက်တွေ ဖြစ်တတ်တယ်။ ဒီဆေးမျိုး မသုံးသင့်သူတွေကတော့ သွေးကြောပိတ်ရောဂါဖြစ်ဘူးသူတွေ၊ အသက်ကြီးသူတွေ၊ သွေးတိုးများသူတွေ၊ (မိုင်ဂရင်း ရောဂါရှိသူတွေ၊ အသဲ မကောင်းသူတွေနဲ့ မသင့်ဘူး။
2. Emergency contraceptive pill အရေးပေါ်တားဆေး
Ecee-2 ပဌမဆေးလုံးကို အကာကွယ်မဲ့ဆက်ဆံမှု ပြုပြီးတာနဲ့ မြန်မြန်သောက်ပါ။ နောက်ထပ် ၁၂ နာရီအကြာမှာ ဒုတိယ ဆေးလုံး သောက်ပါ။ ၇၂ (၃ ရက်) နာရီအတွင်းမှာ ပဌမဆေးလုံးသောက်တာနဲ့ ကာကွယ်နိုင်တယ်။ ၁၂ဝ နာရီ (၅ ရက်) အထိလဲ သုံးနိုင်ကြတယ်။ % မဆိုးပါ။ ခဏခဏမသောက်ရပါ။ အရေးပေါ်အတွက်သာဖြစ်ပါတယ်။
3. Depo Provera (ဒီပို) ထိုးဆေး
ကိုယ်ဝန်တား ၃ လခံထိုးဆေး Depo Provera ကို (DMPA) လို့ ခေါ်တယ်။ (ပရိုဂျက်စ်တင်) ဟော်မုန်း တမျိုးထဲပါတယ်၊ 150mg ကို ၃ လ တခါ။ အသားဆေး ထိုးရတယ်။
4. Condom ယောက်ျားသုံး (ကွန်ဒွမ်)
(၁) ထိရောက်မှု အများဆုံးနည်းတွေ
• အရေပြားအောက် ဆေးချောင်း၊ သားအိမ်ထဲထည့်ပစ္စည်း၊ သားကြောဖြတ်ခြင်းများ = 99%
• ထိုးဆေး = 97%
• စားဆေး၊ (ဗဂျိုင်းနား) ကွင်း = 92-95%
• (ကွန်ဒွမ်)၊ သားအိမ်ဝအဖုံး-အပိတ်၊ ဆေးမြှုပ် = 84-89%
Posted by Alex Aung at 12:27 PM